မချိုဘူး .. အရှုံး က ခါးတယ် . . မြန်မာ | FOX Sports Myanmar
မချိုဘူး .. အရှုံး က ခါးတယ် . . မြန်မာ
မနေ့တုန်းက ထုံးစံအတိုင်း မြန်မာ ရှုံးတယ်။ ပြီးတော့ ပရိသတ်တွေ လည်း ဒေါသလှိုင်လှိုင်ပွင့်ခဲ့ကြပြန်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ အသင်း အဝေးကွင်းမှာ ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ ကာဂျစ်စတန်ကို ဂိုးပြတ်နဲ့ အကြီးအကျယ် ရှုံးလိုက်ပြန်တယ်။ နောက်ဆုံးတွေ့ပြီး ရှုံးထားတာ ထက်ကိုပိုတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဒီလိုမျိုး ပြိုင်ဘက်ကို ဂိုးပြတ်ရှုံးတာဟာ အခြားအသင်းတွေ တောင်ကိုရီးယား၊ ဂျပန် ၊ တရုတ်၊ သြစတြေးလျ၊ အီရန်တို့ကို ဂိုးပြတ်အရေးနိမ့်လိုက်တာထက် ပိုခံစားရတာ ခက်တယ်။
အဲ့ဒီပွဲမှာ မြန်မာ အသင်းဟာ ဘာဆို ဘာမှကိုလုပ်မရတာပါ၊ ပထမပိုင်းမှာတင် ၅-၀၊ ပြောစရာ စကားတောင်မရှိ၊ မြန်မာ ပရိသတ်တွေအားလုံး ဘာကို အပြစ်တင်ရမလဲ၊ လူစာရင်းထွက်လာတည်းကိုက ပရိသတ် တစ်ဝက်လောက်က အားကိုမရတော့တဲ့အသံများနဲ့ ပြောလာကြတာက ဇာတ်လမ်းမစသေးဘူး။ ခရီးကဆုံးနေပြီ တဲ့၊ ပြီးတော့ပြောကြပါသေးတယ်။
သွင်းဂိုးတွေကို ညီညီညာညာ ရေတွက်ရအောင် ပါ တဲ့…
စကားနောက် တရားပါခဲ့သလား၊ ဖြစ်ချိန်တန်လို့ဖြစ်တာလား မသိ..
မြန်မာကတော့ ဂိုးပြတ်ကို ရှုံးတော့တာပါပဲခင်ဗျာ..
ပွဲသိမ်းတော့ ၇-၀ ပါတဲ့…
အသင်းရှုံးလိုက်တာတင်မဟုတ်ဘူး။ တစ်နိုင်ငံလုံးကို ရှုံးချလိုက်တာပါ။ ကျွန်တော်တို့တွေ ဟာဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်လာရင် ကမ္ဘာကို ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ဖို့ဆိုတာ အဝေးကြီးမှာ ပြတ်ကျန်နေရစ်ခဲ့ပါပြီ။ လုပ်နေပေမယ့်လည်း ရှေ့မရောက်သူတို့ ကမ္ဘာထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ တွေ ရှင်သန်ကျန်ရစ်တဲ့ ရုပ်ကြွင်းများလိုပါပဲ။ ကိုင်း… ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲဗျာ..။
ကာဂျစ်စတန်ဟာ သူတို့တွေရဲ့ဘောလုံးသမိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ကို ဂိုးပြတ်နဲ့အနိုင်ယူပြီး သူတို့တွေ အတွက် အမြင့်ဆုံးနိုင်ပွဲစံချိန်ကို အရယူသွားတယ်။ ကျွန်တော်တို့အရှုံးက သူတို့ ဘောလုံးသမိုင်းမှာ အောင်မြင်မှုဖြစ်ထွန်းစေတာက အသစ်၊ အဲ့ဒီလောက်အထိ မြန်မာ အသင်း အထိနာခဲ့တယ်။
ဟုတ်နေတာပါပဲ၊ အထလေးတဲ့ အသင်း၊ အိမ်ရှင် ကာဂျစ်စတန်နဲ့အတွေ့မှာ ၅ ပါးမှောက် ကုန်တော့တာပါပဲ။ ပွဲစပြီး ၁၀ မိနစ်အတွင်း ၂ ဂိုး၊ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ပေးလိုက်ခဲ့ရတယ်။
ဒါ တောင် အားမရသေးဘူး။ ကာဂျစ်က ထုံးစံအတိုင်း မြန်မာရဲ့ကွင်းလယ်အဖျက်နဲ့ ခံစစ်တန်း အားနည်းချက်တွေ ကို အသုံးချပြီး နောက်ထပ် ၃ ဂိုးထပ်သွင်းသွားတယ်။ ပုံစံ အစုံနဲ့ သွင်းတာနော်၊ ကန်ချက်တွေ က သေလောက်တယ်။ ကာဂျစ်စတန်ဟာ ကိုယ်တွေကို လေ့ကျင့်ရေး အသင်းတစ်သင်းလို မျိုး သဘောထားပြီး အေးဆေးကစားသွားတာများ မြင်လို့ မကောင်းဘူး။ အစစအရာရာ ကွာ ဟချက်တွေများလွန်းခဲ့တယ်။
တစ်ဖက်က သိပ်ကောင်းလွန်းနေခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်တွေကိုယ်က ညံ့နေခဲ့တာလို့ပဲမြင် တယ်။ အဲ့ဒီလိုပဲပြောဖြစ်တယ်။ ဇင်မင်းထွန်းကိုထုတ်ပြီး ခံစစ်သမား ဖြစ်တဲ့ ပြည့်ဖြိုးဇော်ကို ထပ်ထည့်တယ်။ မရဘူး၊ ကွင်းလယ်မှာ ခံစစ်သမားတွေ ကို တက်ကစားခိုင်းပြီး တားဆီးတာတောင် အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး။ ဂိုးဆက်ပေးနေရတုန်းပဲ။ အိမ်ရှင်တိုက်စစ် သွားတာ သိပ်မြန်တယ်။ လုံးဝကျွန်တော်တို့တွေ မတားဆီးနိုင်ခဲ့ဘူး။ အားကိုကကွာခြားလွန်းတာလည်းပါတယ်။ ပြီးတော့ ခံစစ်သမားတွေအလယ်တက်ပြီး ဖျက် တောက်တော့ရော ထိရောက်ခဲ့သလား။ အထိုက်အလျှောက်ဆိုတာထက် မပိုခဲ့ဘူး။ ပေါက်တုန်း ပေါက်မြဲပဲလေ။
ကာဂျစ်ဟာ တောင်ပံတွေ အားကို တော်တော်လေးကို ယူပြီးကစားခဲ့တာကို မြန်မာ အသင်းမထိန်းနိုင်ခဲ့ဘူး။ တွေ့တိုင်းလည်း ခံနေရတာ အဲ့ဒီတောင်ပံတွေကို မထိန်းနိုင် နှစ်ပိုင်း ခွဲ ပြောစရာရှိတယ်။ ကာဂျစ်စတန်က ကိုယ်တွေအသင်းကို နှစ်ပိုင်းခွဲပြီး ထိုးဖောက် သွားတယ်။
ပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံး နန္ဒကျော်ဘက်အခြမ်းကနေပြီး တောင်ပံတိုက်စစ်တွေ တရစပ်ဆင် တယ်။ ဘောလုံးတွေ တက်တယ်၊ ဂိုးတွေပေးရတယ်။ အဲ့ဘက်အခြမ်းက ကို ပိတ်လို့ကိုမရနိုင် ဘူး။ ပွင့်တာနဲ့ ဘောလုံးကတက်တက်လာပြီး ကာဂျစ်က ဂိုးတွေသွင်းတော့တာပါပဲ။ အဲ့အခြမ်း ကို ကွင်းလယ် တောင်ပံသမား တွေဆင်းကူ ပိတ်ပေမယ့် မထိရောက်နိုင်ခဲ့ဘူး၊ ဒုတိ ယိပိုင်းမှာတော့ ဇော်လင်းနဲ့ စိုးမိုးကျော် ဘက်အခြမ်းကနေပြီးဘောလုံးတွေက သွားပြန်ရော၊ ထိန်းနိုင်သလား ဆိုတော့ လည်း ထင်သလိုမဟုတ်၊ ဘောလုံးတွေက ထွက်နေတုန်းပဲ။ တားရ တာခက်နေတုန်းပါပဲ။ ပိုဆိုးသွားတာတောင်တွေ့ရတုန်းပဲ။ လူမှန်နေရာမှန်မဟုတ်တော့ အသင်း အနေအထားလည်း ရှုပ်ကုန်၊ခက်ကုန်တော့တာပါပဲ။
တစ်ခုရှိတာက ကာဂျစ်စတန်ဟာ ပထမပိုင်းကလိုတော့မဟုတ်တော့ဘူး။ ကာဂျစ်စတန်က ဂိုးပြတ်လည်းနိုင်နေပြီဆိုတော့ မာန်ကို ခဏပြန်ချပြီး သက်တောင့်သက်သာနဲ့ လိုအပ်သလိုမျိုးအခွင့်အခါသင့်မှ ထိုးဖောက်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့တွေ ပြန်တိုက်နိုင်တာပေါ့။ ကစားကွက်ဖော်ပြီး အရင်တုန်းကလိုမျိုး ပြန်ဖြစ်လာတာပေါ့။ ဒါတောင် မြန်မာက ဂိုးမရဘူး။ အိမ်ရှင်ကပဲ အရန်လူတွေ ထုတ်သုံးကစားပြီး မြန်မာကို ဒုတိယပိုင်းမှာ ပင်နယ်တီတစ်ဂိုးအပါအ၀င် ၂ ဂိုးထပ်သွင်းခဲ့တယ်ဟုတ်။
ဂိုးသမား ကျော်ဇင်ဖြိုး ကိုကြည့်တော့အဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာ ဆိုက်ကိုလော့ဂျစ်အရ သူဟာ ပွဲစတည်း ကိုက ကျရှုံးနေပြီးသား ဖြစ်တယ်။ ဂျပန်နဲ့ပွဲကလိုမျိုးကို မဟုတ်တော့တာပါ။ ဘာကို တွေးပူနေသလဲ၊ တစ်ဖက်က ကန်ချက်မှန်သမျှ သူ ဟာ တည်ငြိမ်မှုနည်းပါးစွာ ဖမ်းသမျှဘောလုံးတွေဟာ ထိရောက်မှုမရှိ၊ စိတ်တွေက ခါထွက်နေတယ်။ ပေါ့ပါးမှုမရှိပဲလှုပ်ရှားမှုတိုင်း က စလိုးမိုးရှင်း၊ သူကိုယ်တိုင် လေးလံနေ တယ်။ သူမှားလို့ ပေးလိုက်ရတဲ့ ဂိုးတွေ ဘယ်နှစ်ဂိုးရှိခဲ့သလဲဆိုတာ ပွဲကြည့်သူတွေသိပါလိမ့်မယ်။ ဖိစီးမှုတစ်ခုအောက်မှာ အလဲလဲအပြိုပြိုဖြစ်နေတာက သူက အရင် ဆိုတော့ ကျန်တာ ကို ဆိုဖွယ်ရာမရှိတော့ဘူးလေ။
တိုက်စစ်ကြည့်ပြန်တော့ ကွင်းလယ်နဲ့ချိတ်ဆက်လို့မရ၊ ကောင်တာမိပြီး ဂိုးရမယ့် အခွင့်အရေး တွေ ၃ ကြိမ်လောက်ရပြန်တော့ ဂိုးသွင်းသပ်ရပ်မှုကမရှိနဲ့ တစ်ဖက်ဂိုးပေါက် ၀ မှာ အဆုံးသပ်အလွဲအလွဲအချော်ချော်ဖြစ်ပြီး ဂိုးမရတာတွေပဲဖြစ်နေတော့ စိတ်မောရတာက ပရိသတ်လေ။ အောင်သူ၊ စည်သူအောင် ဘာမှတွဲမရခဲ့ဘူး။ ရပြန်တော့လည်း လွဲတာက အရင် ဖြစ်နေတယ်။ ရဲရဲ တိုးဝင်ရင် ရနိုင်ပါရက်နဲ့ လူကြောက်ပြီး မတိုးရဲလို့ လွတ်ခဲ့တာတွေ လည်း ရှိခဲ့သေးတာ အားလုံးမြင်ရဦးမှာပါ။
ကွင်းလယ်အဖျက် မှာ ဒိုင်ခံတာဝန်ယူထားသူ လှိုင်းဘိုဘို ညှစ်ပြီးလိုက်ကစားပေမယ့် မိနစ် ၉၀ မှာ သူတစ်ယောက်တည်းနဲ့ဘယ်ရမလဲ။ ပင်နယ်တီတောင်ပေးလိုက်ရတာပဲ ကြည့်၊ လိုက်ဖျက်ထုတ်ရင်းနဲ့ ငြိမိတော့ ပေးလိုက်ရတာပဲ မဟုတ်လား။
ခံစစ်တန်းက လည်း အခုအချိန် အထိ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တွဲမရ၊ ကျန်ခဲ့သူက ကျန်ခဲ့တယ်။ ရပ်ကြည့်သူက ရပ်ကြည့်နေတယ်။ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ် ယူကြပေမယ့် ကြားက ကွက်လပ်တွေက အရင်လိုမျိုး ဟနေဆဲ၊ ပြဲနေဆဲ၊ သူများတွေက ၀င် တိုးခေါင်းတိုက်ဂိုးယူကောင်းနေဆဲဆိုတာ မြန်မာအသင်းနောက်တန်းမှာ မြင်နေရတုန်းပဲ။ လေးလံပြီးတော့ ခြေတစ်လှမ်းအမြဲကျန်ရစ်လို့လည်း မြန်တဲ့ တိုက်စစ်နဲ့ဆုံရင် ခံရပြီဟေ့ ဆိုရင် မြန်မာက အရင်ပဲ။ ခြေစစ်ပွဲတစ်လျှောက် အဲ့ဒါကို ဆက်တိုက်တွေ့နေရတာ သိပ်ပြီး ဘ၀င်မကျချင်တော့ဘူး။
မြန်မာအသင်း ရဲ့ဘယ်အခြမ်းကို ခြေစစ်ပွဲ ကစားတိုင်း ပြိုင်ဘက် အသင်းတိုင်းက အားထားပြီး ဖိဖောက်တယ်။ အခုမှမဟုတ်ဘူး။ ဟိုးအရင်တည်းကဖြစ်နေတာ။ နန္ဒကျော် တစ်ယောက် တည်းနဲ့ မြန်ဆန်တဲ့ တိုက် စစ်ကို သူလိုက်ထိန်းဖို့မလွယ်ဘူး။
သူ့ကို ကူပေးမယ့် ၊ကာပေးမယ့် ၊ရှုပ်ပေးမယ့် ၊လုပေးမယ့် ၊ တားပေမယ့် သူမရှိတော့ ရေရှည်မှာ ထိုးဖောက်ခံရပြီး ဖိအားပေးခံရတာဟာ မဆန်းတော့ဘူး။ ပြီးတော့ ထပ်ပြောဖြစ်တာက ကွင်းလယ်အဖျက်ပါ၊ အဲ့ဒီအပိုင်းဟာ အခုအချိန် အထိ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အားနည်းနေတဲ့ ကွက်လပ်၊ အခုနည်းပြအထိ မဖာထေးနိုင်ဘူး။
မွန်ဂို လီးယားနဲ့ ပွဲထက် ဒီပွဲက ပိုပြီးတော့မြန်မာအသင်း မစွံခဲ့ပါဘူး။ လူမစုံတာက တစ်ပိုင်းပေါ့လေ။ နည်းစနစ်အရကို ကျွန်တော်တို့တွေ လွဲနေတုန်း ပါပဲ။ တိုက်စစ်ကို သွားချင်တာလား၊ ခံစစ်ပြင်ထားတာလား၊ မသဲကွဲဘူး။ အားလုံးက ထိရောက် မှုမရှိခဲ့သလို မစ္စတာရာဒူလိုဗစ် အကြိုက် ဖြစ်ခဲ့တာနည်းပါးခဲ့ပါလိမ့်မယ်။
ကျော်ဇင်လွင်၊ဒေးဗစ်ထန်တို့လိုမျိုး ခံစစ်တောင်ပံသမား စစ်စစ်တွေရှိပါရက်နဲ့ အဝေးကွင်းမှာ ခံစစ်လုံဖို့အဓိကထားလို့ လုံးဝ ထုတ်မသုံးတာ နားလည်ပေးနိုင်ပေမယ့် တစ်ယောက် တစ်လေ လောက်တော့ ဒီလိုအနေအထားမှာ လူစားဝင်ကစားသမားအဖြစ် ထည့်သုံးစေချင်မိတာအမှန်ပါပဲ။ အခုလိုမျိုးမသုံးဖြစ်ပဲနဲ့ မတို့မထိပဲနဲ့များ ခြေစစ်ပွဲတွေမှာ ရွေးပြီးခေါ်သွားတာကို သိပ်ဘ၀င်မကျမိဘူး။ မွန်ဂိုနဲ့ပွဲတုန်းက ကျော်ဇင်လွင်တို့ကို အနေ အထားအရ ထည့်သုံးခဲ့သလိုမျိုး ဒီပွဲမှာ သူတို့တွေရဲ့ လုပ်အားကို ပြန်မြင်ချင်ခဲ့မိတာ အမှန်ပါ။
နောက်ဆုံးတော့လည်း အဆုံးသပ်လိုက်တော့ ကျွန်တော်တို့ပဲ ရှုံးခဲ့တယ်။
အားခြင်းကွာတယ်၊ ပရိုဆိုတာခြင်းကွာတယ်၊ ခံယူချက်တွေခြင်းကွာတယ်။ နောက်ဆုံး နည်းပြ ကအစ ကစာသမားက အဆုံး ထင်မြင်ယူဆချက်နဲ့ ယုံကြည်ချက်ခြင်းပါ ကွာသွားတော့ ပြီးပါရောပေါ့။ လာမယ့်နိုဝင်ဘာ ၁၄ မှာ တာဂျစ်ကစ္စတန် နဲ့ထပ်ဆုံမယ်၊ ဘာတွေဖြစ်လာဦးမလဲ။ စိတ်နာနာနဲ့ မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဘောလုံးအသင်းကို ဆက်လက်အားပေးဖြစ်မယ်။ အရှုံးနဲလည်း ယဉ်ပါးနေတာကြာပါပြီ။
ဟုတ်ပါတယ်။ မချိုပါဘူး။ အရှုံးကခါးတယ်။ ဘယ်အချိန် ထဖောက်ပြီးတော့ ချိုမြနေမလဲဆို တဲ့ အရသာကို ခံစားမြည်းစမ်းနိုင်ဖို့ အားတင်းရင်းနဲ့….
မချိုဘူး.. အရှုံးက ခါးတယ် မြန်မာ…
မနေႚတုန်းက ထုံးစံအတိုင်ူးမန်မာ ရြံးတယ်။္ဘပီးတော့ ပရိသတ်တြေ လည်း ဒေၝသလိင်ြလိင်ြပငြ့်ခဲု့ကူပန်တယ်။ ကဵန်ြတော်တိုႚ အသင်း အဝေးကငြ်းမြ္ဘာပိင်ြဘက်ူဖစ်တဲ့ ကာဂဵစ်စတန်ကို ဂိုးပတ်နဲႚ အဋ္ဌကီးအကဵယ် ရြံးလိုက်ူပန်တယ်။ နောက်ဆုံးတြေႚ္ဘပီး ရြံးထားတာ ထက်ကိုပိုတယ်။
ကဵန်ြတော်တိုႚ ဒီလိုမဵြိး္ဘပိင်ြဘက်ကို ဂိုးပတ်ရြံးတာဟာ အူခားအသင်းတြေ တောင်ကိုရီးယား၊ ဂဵပန် ၊ တရုတ်၊ ဩစေုတးလဵ၊ အီရန်တိုႚကို ဂိုးပတ်အရေးနိမ့်လိုက်တာထက် ပိုခံစားရတာ ခက်တယ်။
အဲ့ဒီပဲမြာူမန်မာ အသင်းဟာ ဘာဆို ဘာမကြိုလုပ်မရတာပၝ၊ ပထမပိုင်းမြာတင် ၅-ဝ၊ေူပာစရာ စကားတောင်မရြိ၊ူမန်မာ ပရိသတ်တေအြားလုံး ဘာကို အူပစ်တင်ရမလဲ၊ လူစာရင်းထက်ြလာတည်းကိုက ပရိသတ် တစ်ဝက်လောက်က အားကိုမရတော့တဲ့အသံမဵားနဲႚေူပာလာုကတာက ဇာတ်လမ်းမစသေးဘူး။ ခရီးကဆုံးန္ဘေပီ တဲ့၊္ဘပီးတော့ေူပာုကပၝသေးတယ်။
သငြ်းဂိုးတေကြို ညီညီညာညာ ရေတက်ြရအောင် ပၝ တဲ့…
စကားနောက် တရားပၝခဲ့သလား၊ူဖစ်ခဵိန်တန်လိုႚူဖစ်တာလား မသိ..
ူမန်မာကတော့ ဂိုးပတ်ကို ရြံးတော့တာပၝပဲခင်ဗဵာ..
ပဲသြိမ်းတော့ ၇-ဝ ပၝတဲ့…
အသင်းရြံးလိုက်တာတင်မဟုတ်ဘူး။ တစ်ိုိံင်ငံလုံးကို ရြံးခဵလိုက်တာပၝ။ ကဵန်ြတော်တိုႚတြေ ဟာဘောလုံးနဲႚပတ်သက်လာရင် ကမ္တာကို ရင်ဘောင်တန်ိးုိံင်ဖိုႚဆိုတာ အဝေးဋ္ဌကီးမြာူပတ်ကဵန်နေရစ်ခဲ့ပၝ္ဘပီ။ လုပ်နေပေမယ့်လည်း ရြေႚမရောက်သူတိုႚ ကမ္တာထဲမြာ ကဵန်ြတော်တိုႚ တြေ ရင်ြသန်ကဵန်ရစ်တဲ့ ရုပ်ုကငြ်းမဵားလိုပၝပဲ။ ကိုင်း… ဘာဆက်လုပ်ုကမလဲဗဵာ..။
ကာဂဵစ်စတန်ဟာ သူတိုႚတေရြဲႚဘောလုံးသမိုင်းမြာ ကဵန်ြတော်တိုႚကို ဂိုးပတ်နဲႚအိုိံင်ယ္ဘူပီး သူတိုႚတြေ အတကြ် အူမင့်ဆုံိးုိံင်ပဲစြံခဵိန်ကို အရယူသြားတယ်။ ကဵန်ြတော်တိုႚအရြံးက သူတိုႚ ဘောလုံးသမိုင်းမြာ အောင်ူမင်မြူဖစ်ထနြ်းစေတာက အသစ်၊ အဲ့ဒီလောက်အထိူမန်မာ အသင်း အထိနာခဲ့တယ်။
ဟုတ်နေတာပၝပဲ၊ အထလေးတဲ့ အသင်း၊ အိမ်ရငြ် ကာဂဵစ်စတန်နဲႚအတြေႚမြာ ၅ ပၝးမြောက် ကုန်တော့တာပၝပဲ။ ပဲစ္ဘြပီး ၁၀ မိနစ်အတငြ်း ၂ ဂိုး၊ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ပေးလိုက်ခဲ့ရတယ်။
ဒၝ တောင် အားမရသေးဘူး။ ကာဂဵစ်က ထုံးစံအတိုင်ူးမန်မာရဲႚကငြ်းလယ်အဖဵက်နဲႚ ခံစစ်တန်း အားနည်းခဵက်တြေ ကို အသုံးခဵ္ဘပီး နောက်ထပ် ၃ ဂိုးထပ်သငြ်းသြားတယ်။ ပုံစံ အစုံနဲႚ သငြ်းတာနော်၊ ကန်ခဵက်တြေ က သေလောက်တယ်။ ကာဂဵစ်စတန်ဟာ ကိုယ်တေကြို လေ့ကဵင့်ရေး အသင်းတစ်သင်းလို မဵြိး သဘောထား္ဘပီး အေးဆေးကစားသြားတာမဵာူးမင်လိုႚ မကောင်းဘူး။ အစစအရာရာ ကြာ ဟခဵက်တေမြဵားလနြ်းခဲ့တယ်။
တစ်ဖက်က သိပ်ကောင်းလနြ်းနေခဲ့တာမဵြိးမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်တေကြိုယ်က ညံ့နေခဲ့တာလိုႚပဲူမင် တယ်။ အဲ့ဒီလိုပဲေူပာူဖစ်တယ်။ ဇင်မင်းထနြ်းကိုထုတ်္ဘပီး ခံစစ်သမာူးဖစ်တဲူ့ပည့်္ဘဖြိးဇော်ကို ထပ်ထည့်တယ်။ မရဘူး၊ ကငြ်းလယ်မြာ ခံစစ်သမားတြေ ကို တက်ကစားခိုင်း္ဘပီး တားဆီးတာတောင် အဆင်မေူပခဲ့ပၝဘူး။ ဂိုးဆက်ပေးနေရတုန်းပဲ။ အိမ်ရင်ြတိုက်စစ် သြားတာ သိပ်ူမန်တယ်။ လုံးဝကဵန်ြတော်တိုႚတြေ မတားဆီိးုိံင်ခဲ့ဘူး။ အားကိုကကြာူခားလနြ်းတာလည်းပၝတယ်။္ဘပီးတော့ ခံစစ်သမားတေအြလယ်တက်္ဘပီး ဖဵက် တောက်တော့ရော ထိရောက်ခဲ့သလား။ အထိုက်အလ္တွောက်ဆိုတာထက် မပိုခဲ့ဘူး။ ပေၝက်တုန်း ပေၝက်္ဘမဲပဲလေ။
ကာဂဵစ်ဟာ တောင်ပံတြေ အားကို တော်တော်လေးကို ယ္ဘူပီးကစားခဲ့တာကိုမန်မာ အသင်းမထိန်ိးိုံင်ခဲ့ဘူး။ တြေႚတိုင်းလည်း ခံနေရတာ အဲ့ဒီတောင်ပံတေကြို မထိန်ိးိုံင်ိံစ်ြပိုင်း ခြဲေူပာစရာရြိတယ်။ ကာဂဵစ်စတန်က ကိုယ်တေအြသင်းကိုံစ်ြပိုင်းခြ္ဘဲပီး ထိုးဖောက် သြားတယ်။
ပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံး နိံ္ဋကေဵာ်ဘက်အူခမ်းကန္ဘေပီး တောင်ပံတိုက်စစ်တြေ တရစပ်ဆင် တယ်။ ဘောလုံးတြေ တက်တယ်၊ ဂိုးတေပြေးရတယ်။ အဲ့ဘက်အူခမ်းက ကို ပိတ်လိုႚကိုမရိုိံင် ဘူး။ ပငြ့်တာနဲႚ ဘောလုံးကတက်တက်လ္ဘာပီး ကာဂဵစ်က ဂိုးတေသြငြ်းတော့တာပၝပဲ။ အဲ့အူခမ်း ကို ကငြ်းလယ် တောင်ပံသမား တေဆြင်းကူ ပိတ်ပေမယ့် မထိရောက်ိုိံင်ခဲ့ဘူး၊ ဒုတိ ယိပိုင်းမြာတော့ ဇော်လင်းနဲႚ စိုးမိုးကေဵာ် ဘက်အူခမ်းကန္ဘေပီးဘောလုံးတေကြ သြာူးပန်ရော၊ ထိန်ိးုိံင်သလား ဆိုတော့ လည်း ထင်သလိုမဟုတ်၊ ဘောလုံးတေကြ ထက်ြနေတုန်းပဲ။ တားရ တာခက်နေတုန်းပၝပဲ။ ပိုဆိုးသြားတာတောင်တြေႚရတုန်းပဲ။ လူမန်ြနေရာမန်ြမဟုတ်တော့ အသင်း အနေအထားလည်း ရပ်ြကုန်၊ခက်ကုန်တော့တာပၝပဲ။
တစ်ခုရြိတာက ကာဂဵစ်စတန်ဟာ ပထမပိုင်းကလိုတော့မဟုတ်တော့ဘူး။ ကာဂဵစ်စတန်က ဂိုးပတ်လည်ိးုိံင်န္ဘေပီဆိုတော့ မာန်ကို ခဏူပန်ခဵ္ဘပီး သက်တောင့်သက်သာနဲႚ လိုအပ်သလိုမဵြိးအခငြ့်အခၝသင့်မြ ထိုးဖောက်တယ်။ ဒၝေုကာင့် ကဵန်ြတော်တိုႚတြေူပန်တိုက်ိုိံင်တာပေၝ့။ ကစားကက်ြဖော်္ဘပီး အရင်တုန်းကလိုမဵြိူးပန်ူဖစ်လာတာပေၝ့။ ဒၝတောင်ူမန်မာက ဂိုးမရဘူး။ အိမ်ရင်ြကပဲ အရန်လူတြေ ထုတ်သုံးကစား္ဘပီူးမန်မာကို ဒုတိယပိုင်းမြာ ပင်နယ်တီတစ်ဂိုးအပၝအဝင် ၂ ဂိုးထပ်သငြ်းခဲ့တယ်ဟုတ်။
ဂိုးသမား ကေဵာ်ဇင်္ဘဖြိး ကိုကည့်တော့အဲ့ဒီနေႚပဲမြာ ဆိုက်ကိုလော့ဂဵစ်အရ သူဟာ ပဲစြတည်း ကိုက ကဵရြံးန္ဘေပီးသာူးဖစ်တယ်။ ဂဵပန်နဲႚပဲကြလိုမဵြိးကို မဟုတ်တော့တာပၝ။ ဘာကို တြေးပူနေသလဲ၊ တစ်ဖက်က ကန်ခဵက်မန်ြသမ္တွ သူ ဟာ တည်္ဘငိမ်မနြည်းပၝးစြာ ဖမ်းသမ္တွဘောလုံးတေဟြာ ထိရောက်မမြရြိ၊ စိတ်တေကြ ခၝထက်ြနေတယ်။ ပေၝ့ပၝးမမြရြိပဲလပ်ြရြားမတြိုင်း က စလိုးမိုးရငြ်း၊ သူကိုယ်တိုင် လေးလံနေ တယ်။ သူမြားလိုႚ ပေးလိုက်ရတဲ့ ဂိုးတြေ ဘယ်ိံစ်ြဂိုးရြိခဲ့သလဲဆိုတာ ပြဲုကည့်သူတေသြိပၝလိမ့်မယ်။ ဖိစီးမတြစ်ခုအောက်မြာ အလဲလဲအ္ဘပ္ဘြိပြိူဖစ်နေတာက သူက အရင် ဆိုတော့ ကဵန်တာ ကို ဆိုဖယ်ြရာမရြိတော့ဘူးလေ။
တိုက်စစ်ုကည့်ူပန်တော့ ကငြ်းလယ်နဲႚခဵိတ်ဆက်လိုႚမရ၊ ကောင်တာမ္ဘိပီး ဂိုးရမယ့် အခငြ့်အရေး တြေ ၃ ဋ္ဌကိမ်လောက်ရူပန်တော့ ဂိုးသငြ်းသပ်ရပ်မကြမရြိနဲႚ တစ်ဖက်ဂိုးပေၝက် ဝ မြာ အဆုံးသပ်အလဲအြလဲအြခေဵာ်ခေဵာ်ူဖစ်္ဘပီး ဂိုးမရတာတေပြဲူဖစ်နေတော့ စိတ်မောရတာက ပရိသတ်လေ။ အောင်သူ၊ စည်သူအောင် ဘာမတြဲမရခဲ့ဘူး။ ရူပန်တော့လည်း လဲတြာက အရင်ူဖစ်နေတယ်။ ရဲရဲ တိုးဝင်ရင် ရိုိံင်ပၝရက်နဲႚ လူေုကာက်္ဘပီး မတိုးရဲလိုႚ လတ်ြခဲ့တာတြေ လည်း ရြိခဲ့သေးတာ အားလုံူးမင်ရဦးမြာပၝ။
ကငြ်းလယ်အဖဵက် မြာ ဒိုင်ခံတာဝန်ယူထားသူ လိငြ်းဘိုဘို ညစ်္ဘြပီးလိုက်ကစားပေမယ့် မိနစ် ၉၀ မြာ သူတစ်ယောက်တည်းနဲႚဘယ်ရမလဲ။ ပင်နယ်တီတောင်ပေးလိုက်ရတာပဲုကည့်၊ လိုက်ဖဵက်ထုတ်ရင်းနဲႚ္ဘငိမိတော့ ပေးလိုက်ရတာပဲ မဟုတ်လား။
ခံစစ်တန်းက လည်း အခုအခဵိန် အထိ တစ်ယောက်နဲႚတစ်ယောက် တြဲမရ၊ ကဵန်ခဲ့သူက ကဵန်ခဲ့တယ်။ ရပ်ုကည့်သူက ရပ်ုကည့်နေတယ်။ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ် ယူုကပေမယ့်ုကားက ကက်ြလပ်တေကြ အရင်လိုမဵြိး ဟနေဆဲ၊္ဘပဲနေဆဲ၊ သူမဵားတေကြ ဝင် တိုးခေၝင်းတိုက်ဂိုးယူကောင်းနေဆဲဆိုတာူမန်မာအသင်းနောက်တန်းမြာူမင်နေရတုန်းပဲ။ လေးလံ္ဘပီးတော့ေူခတစ်လမြ်းအ္ဘမဲကဵန်ရစ်လိုႚလည်ူးမန်တဲ့ တိုက်စစ်နဲႚဆုံရင် ခံရ္ဘပီဟေ့ ဆိုရင်ူမန်မာက အရင်ပဲ။ေူခစစ်ပြဲတစ်လ္တွောက် အဲ့ဒၝကို ဆက်တိုက်တြေႚနေရတာ သိပ်္ဘပီး ဘဝင်မကဵခဵင်တော့ဘူး။
ူမန်မာအသင်း ရဲႚဘယ်အူခမ်းကိုေူခစစ်ပြဲ ကစားတိုင်း္ဘပိင်ြဘက် အသင်းတိုင်းက အားထား္ဘပီး ဖိဖောက်တယ်။ အခုမမြဟုတ်ဘူး။ ဟိုးအရင်တည်းကူဖစ်နေတာ။ နိံ္ဋကေဵာ် တစ်ယောက် တည်းနဲႚူမန်ဆန်တဲ့ တိုက် စစ်ကို သူလိုက်ထိန်းဖိုႚမလယ်ြဘူး။
သူႚကို ကူပေးမယ့် ၊ကာပေးမယ့် ၊ရပ်ြပေးမယ့် ၊လုပေးမယ့် ၊ တားပေမယ့် သူမရြိတော့ ရေရည်ြမြာ ထိုးဖောက်ခံရ္ဘပီး ဖိအားပေးခံရတာဟာ မဆန်းတော့ဘူး။္ဘပီးတော့ ထပ်ေူပာူဖစ်တာက ကငြ်းလယ်အဖဵက်ပၝ၊ အဲ့ဒီအပိုင်းဟာ အခုအခဵိန် အထိ ကဵန်ြတော်တိုႚရဲႚ အားနည်းနေတဲ့ ကက်ြလပ်၊ အခုနည်ူးပအထိ မဖာထေိးုိံင်ဘူး။
မန်ြဂို လီးယားနဲႚ ပြဲထက် ဒီပဲကြ ပ္ဘိုပီးတောူ့မန်မာအသင်း မစံခြဲ့ပၝဘူး။ လူမစုံတာက တစ်ပိုင်းပေၝ့လေ။ နည်းစနစ်အရကို ကဵန်ြတော်တိုႚတြေ လြဲနေတုန်း ပၝပဲ။ တိုက်စစ်ကို သြားခဵင်တာလား၊ ခံစစ်ူပင်ထားတာလား၊ မသဲကြဲဘူး။ အားလုံးက ထိရောက် မမြရြိခဲ့သလို မင်္စတာရာဒူလိုဗစ် အဋ္ဌကိကြ်ူဖစ်ခဲ့တာနည်းပၝးခဲ့ပၝလိမ့်မယ်။
ကေဵာ်ဇင်လငြ်၊ဒေးဗစ်ထန်တိုႚလိုမဵြိး ခံစစ်တောင်ပံသမား စစ်စစ်တေရြိပၝရက်နဲႚ အဝေးကငြ်းမြာ ခံစစ်လုံဖိုႚအဓိကထားလိုႚ လုံးဝ ထုတ်မသုံးတာ နားလည်ပေိးုိံင်ပေမယ့် တစ်ယောက် တစ်လေ လောက်တော့ ဒီလိုအနေအထားမြာ လူစားဝင်ကစားသမားအူဖစ် ထည့်သုံးစေခဵင်မိတာအမန်ြပၝပဲ။ အခုလိုမဵြိးမသုံူးဖစ်ပဲနဲႚ မတိုႚမထိပဲနဲႚမဵားေူခစစ်ပဲတြေမြာ ရြေး္ဘပီးခေၞသြားတာကို သိပ်ဘဝင်မကဵမိဘူး။ မန်ြဂိုနဲႚပဲတြုန်းက ကေဵာ်ဇင်လင်ြတိုႚကို အနေ အထားအရ ထည့်သုံးခဲ့သလိုမဵြိး ဒီပဲမြာ သူတိုႚတေရြဲႚ လုပ်အားကိုပန်ူမင်ခဵင်ခဲ့မိတာ အမန်ြပၝ။
နောက်ဆုံးတော့လည်း အဆုံးသပ်လိုက်တော့ ကဵန်ြတော်တိုႚပဲ ရြံးခဲ့တယ်။
အာူးခင်းကြာတယ်၊ ပရိုဆိုတာူခင်းကြာတယ်၊ ခံယူခဵက်တြေူခင်းကြာတယ်။ နောက်ဆုံး နည်ူးပ ကအစ ကစာသမားက အဆုံး ထင်ူမင်ယူဆခဵက်နဲႚ ယုံကည်ခဵက်ူခင်းပၝ ကြာသြားတော့္ဘပီးပၝရောပေၝ့။ လာမယ့်ိုံဝင်ဘာ ၁၄ မြာ တာဂဵစ်ကင်္စတန် နဲႚထပ်ဆုံမယ်၊ ဘာတြေူဖစ်လာဦးမလဲ။ စိတ်နာနာနဲႚူမန်မာ့လက်ရြေးစင်ဘောလုံးအသင်းကို ဆက်လက်အားပေူးဖစ်မယ်။ အရြံးနဲလည်း ယဉ်ပၝးနေတာုကာပၝ္ဘပီ။
ဟုတ်ပၝတယ်။ မခဵိပြၝဘူး။ အရြံးကခၝးတယ်။ ဘယ်အခဵိန် ထဖောက်္ဘပီးတော့ ခဵြိူမနေမလဲဆို တဲ့ အရသာကို ခံစာူးမည်းစမ်ိးိုံင်ဖိုႚ အားတင်းရင်းနဲႚ….
မခဵိဘြူး.. အရြံးက ခၝးတယ်ူမန်မာ…
Home Football Team Myanmar မချိုဘူး .. အရှုံး က ခါးတယ် . . မြန်မာ